Sɛnea Wobɛsom Onyankopɔn na Woabɛn No | Bɛn Yehowa
‘Bɛn Onyankopɔn, na Ɔbɛbɛn Wo’
1-3. (a) Sɛ yɛhwɛ sɛnea awofo ne wɔn ba akokoaa di nkitaho no a, dɛn na yebetumi asua afa nnipa su ho? (b) Sɛ obi da ɔdɔ adi kyerɛ yɛn a, dɛn na yɛyɛ, na asɛm a ɛho hia bɛn na ɛsɛ sɛ yebisa yɛn ho?
AWOFO ani gye sɛ wobehu sɛ wɔn ba a wɔawo no foforo reserew. Wɔtaa de wɔn anim bɛn akokoaa no, kasa serew kyerɛ no anigye so. Wɔde anigye hwɛ kwan sɛ akokoaa no nso begye so. Na ɛnkyɛ na wagye so—akokoaa no afono keka kɔ mu, n’anofafa yerɛyerɛw, na ɔserew anigye so. Ɛte sɛ nea saa ɔserew no kyerɛ ɔdɔ a ɔda no adi wɔ ɔkwan soronko so, ɔdɔ a edi kan a akokoaa no da no adi de gye awofo no dɔ a wɔda no adi kyerɛ no no so.
2 Akokoaa no serew no kae yɛn nnipa su ho biribi a ehia. Yɛde ɔdɔ hyia ɔdɔ. Saa ara na wɔyɛɛ yɛn. (Dwom 22:9) Bere a yenyin no, yenyin wɔ sɛnea yɛyɛ yɛn ade wɔ ɔdɔ ho no mu. Ebia wubetumi akae sɛnea w’awofo, abusuafo, anaa nnamfo daa ɔdɔ adi kyerɛɛ wo wɔ wo mmofraberem no. Ɔdɔ gyee ntini, nyinii, na eguu nhwiren wɔ wo koma mu. Wo nso wodaa ɔdɔ adi kyerɛɛ wɔn. So saa ara na ɛrekɔ so wɔ wo ne Yehowa Nyankopɔn ntam abusuabɔ mu?
3 Bible ka sɛ: “Yɛdɔ, efisɛ ɔno na ɔdɔɔ yɛn kan.” (1 Yohane 4:19) Nhoma yi Fã 1 kosi 3 no mu no, wɔkaee wo sɛ Yehowa Nyankopɔn de ne tumi, n’atɛntrenee, ne ne nyansa adi dwuma wɔ akwan a ɔdɔ wom so ama woanya so mfaso. Na wɔ Ɔfã a ɛto so 4 mu no, wuhui sɛ wada ne dɔ adi tẽẽ akyerɛ adesamma—ne w’ankasa—wɔ akwan a ɛyɛ nwonwa so. Afei asɛmmisa bi sɔre. Ɔkwan bi so no, ɛne asɛm a ɛho hia sen biara a wubetumi abisa wo ho: ‘Mɛyɛ dɛn ayɛ Yehowa dɔ no ho biribi?’
Nea Ɔdɔ a Yɛbɛdɔ Onyankopɔn Kyerɛ
4. Ɔkwan bɛn so na nnipa adwene atu afra wɔ nea Onyankopɔn a yɛbɛdɔ no kyerɛ no ho?
4 Yehowa, ɔdɔ Wura no, nim yiye sɛ ɔdɔ wɔ tumi kɛse sɛ ebetumi ama afoforo ada su pa adi. Enti ɛmfa ho atua a adesamma a wonni nokware akɔ so atew no, Yehowa akɔ so anya ahotoso sɛ nnipa bi bɛyɛ ne dɔ ho biribi. Na, nokwarem no, nnipa ɔpepem pii ayɛ saa. Nanso, awerɛhosɛm ne sɛ, wiase a aporɔw yi mu ɔsom ahorow no ama nnipa adwene atu afra wɔ nea ɔdɔ a yɛbɛdɔ Onyankopɔn kyerɛ no ho. Nnipa pii ka sɛ wɔdɔ Onyankopɔn, nanso ɛte sɛ nea wosusuw sɛ ɔdɔ a ɛte saa no yɛ nkate a yɛka ho asɛm ara kwa. Ɔdɔ a yebenya ama Onyankopɔn no betumi afi ase wɔ saa kwan no so, sɛnea akokoaa nam serew so na edi kan da ɔdɔ adi kyerɛ n’awofo no. Nanso, wɔ nnipa a wɔanyinyin fam de, pii ka ho.
5. Bible kyerɛkyerɛ ɔdɔ a yɛbɛdɔ Onyankopɔn no mu dɛn, na dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛn ani gye saa nkyerɛkyerɛmu no ho?
5 Yehowa kyerɛ nea ɔdɔ a yɛbɛdɔ no kyerɛ no mu. N’asɛm ka sɛ: “Eyi ne Nyankopɔn dɔ, sɛ yebedi n’ahyɛde so.” Ɛnde, ɛsɛ sɛ yɛde nneyɛe kyerɛ ɔdɔ a yɛwɔ ma Onyankopɔn. Nokwarem no, nnipa pii ani nnye osetieyɛ ho. Nanso, nkyekyɛm koro no ara fi ayamye mu de ka ho sɛ: ‘Na Onyankopɔn ahyɛde no nyɛ den.’ (1 Yohane 5:3) Wɔayɛ Yehowa mmara ne nnyinasosɛm wɔ ɔkwan bi so a ɛso bɛba yɛn mfaso, na ɛnyɛ sɛ ɛbɛhyɛ yɛn so. (Yesaia 48:17, 18) Nnyinasosɛm ahorow a ɛboa yɛn ma yɛbɛn Onyankopɔn ahyɛ N’asɛm mu ma. Ɔkwan bɛn so? Ma yɛnhwehwɛ yɛne Onyankopɔn ntam abusuabɔ afã abiɛsa mu nhwɛ. Eyinom ne nkitahodi, ɔsom, ne sua a yebesuasua no.
Nkitaho a Yɛne Yehowa Bedi
6-8. (a) Ɔkwan bɛn na yebetumi afa so atie Yehowa? (b) Sɛ yɛkenkan Kyerɛwnsɛm no a, ɔkwan bɛn so na yebetumi ama emu ada hɔ?
6 Asɛmmisa yi na wɔde fii Ti 1 no ase, “So wubetumi ayɛ Onyankopɔn a wo ne no rebɔ nkɔmmɔ ho mfonini wɔ w’adwenem?” Yehui sɛ na eyi nyɛ nsusuwii hunu ara kwa. Nokwarem no, Mose ne no nyaa nkɔmmɔbɔ a ɛte saa. Na yɛn nso ɛ? Ɛnnɛ nyɛ bere a Yehowa bɛsoma n’abɔfo ma wɔne nnipa abɛbɔ nkɔmmɔ. Nanso, Yehowa wɔ ɔkwan a ɛkyɛn so a ɔne yɛn di nkitaho nnɛ. Yɛbɛyɛ dɛn atie Yehowa asɛm?
7 Esiane sɛ “Kyerɛw nyinaa fi Nyankopɔn home mu” nti, yetie Yehowa asɛm denam N’asɛm, Bible, a yɛbɛkenkan so. (2 Timoteo 3:16) Enti, Ɔhene Dawid hyɛɛ Yehowa asomfo nkuran sɛ wɔnyɛ akenkan a ɛte saa “awia ne anadwo.” (Dwom 1:1, 2) Saa a yɛbɛyɛ no gye mmɔdenbɔ kɛse wɔ yɛn fam. Nanso, mmɔdenbɔ a ɛte saa nyinaa yɛ nea mfaso wɔ so. Sɛnea yehui wɔ Ti 18 mu no, Bible te sɛ krataa a ɛsom bo a yɛanya afi yɛn soro Agya nkyɛn. Enti ɛnsɛ sɛ n’akenkan yɛ adwuma. Sɛ yɛrekenkan a, ɛsɛ sɛ yɛma Kyerɛwnsɛm no mu da hɔ. Yɛbɛyɛ dɛn atumi ayɛ saa?
8 Sɛ worekenkan Bible no a, yɛ emu nsɛm no ho mfonini wɔ w’adwenem. Bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ Bible mu nnipa no ho mfonini wɔ w’adwenem sɛ nnipa a wuhu wɔn ankasa. Bɔ mmɔden sɛ wobɛte wɔn suahu, wɔn nsɛm tebea, ne adwenhorow a wokura no ase. Afei, susuw nea wokenkan no ho yiye, na bisa wo ho nsɛm te sɛ: ‘Yehowa ho ade bɛn na saa asɛm yi kyerɛkyerɛ me? Ne su ahorow no mu nea ɛwɔ he na mihu yi? Nnyinasosɛm bɛn na Yehowa pɛ sɛ mihu, na ɔkwan bɛn so na metumi de adi dwuma wɔ m’asetra mu?’ Kenkan, susuw ho na fa di dwuma—bere a woyɛ saa no, Onyankopɔn Asɛm mu bɛda hɔ ama wo.—Dwom 77:12; Yakobo 1:23-25.
9. Hena ne “akoa nokwafo ne ɔbadwemma” no, na dɛn nti na ɛho hia sɛ yɛyɛ aso tie “akoa” no?
9 Yehowa nam “akoa nokwafo ne ɔbadwemma” no nso so kasa kyerɛ yɛn. Sɛnea Yesu ka siei no, wɔapaw Kristofo kuw ketewaa bi a wɔasra wɔn sɛ wɔmma honhom fam “aduan ɛbere a ɛsɛ mu” wɔ nna a edi akyiri mu tebea bɔne yi mu. (Mateo 24:45-47) Sɛ yɛkenkan nhoma a wɔasiesie sɛ ɛmmoa yɛn mma yennya Bible mu nokware nimdeɛ no na yɛkɔ Kristofo nhyiam ne nhyiam akɛse a, na akoa no rema yɛn honhom fam aduan ne no. Esiane sɛ ɛyɛ Kristo akoa nti, yefi nyansam de Yesu nsɛm yi di dwuma: ‘Monhwɛ yiye sɛnea mote asɛm no fa.’ (Luka 8:18) Yɛyɛ aso tie asɛm efisɛ yegye akoa nokwafo no tom sɛ Yehowa akwan a ɔfa so ne yɛn di nkitaho no mu biako.
10-12. (a) Dɛn nti na mpaebɔ yɛ akyɛde a ɛyɛ anigye a efi Yehowa hɔ? (b) Yɛbɛyɛ dɛn atumi abɔ mpae ma asɔ Yehowa ani, na dɛn nti na yebetumi anya ahotoso sɛ yɛn mpaebɔ sɔ n’ani?
10 Na nkitaho a yɛne Onyankopɔn bedi nso ɛ? So yebetumi ne Yehowa akasa? Ɛyɛ nsusuwii a ɛyɛ hu. Sɛ ɛba sɛ ɛsɛ sɛ wokɔ wo man sodifo bi a ɔwɔ tumi anim ne no kɔka w’asɛnhia bi a, so ɛbɛyɛ mmerɛw sɛ wo nsa bɛka no? Baabi wɔ hɔ a, saa a wobɛyɛ no betumi ayɛ nea asiane wom! Wɔ Ester ne Mordekai bere so no, na wobetumi akum obi a ɔbɛkɔ Persia hene anim a ɔhene no ntoo nsa mfrɛɛ no. (Ester 4:10, 11) Afei, susuw ho sɛ worekɔ Amansan Hene a sɛ wode nnipa a wɔwɔ tumi sen biara toto ne ho a wɔte sɛ “mmoadabi” no anim. (Yesaia 40:22) So ɛsɛ sɛ n’anim a yɛbɛkɔ no bɔ yɛn hu? Dabida!
11 Yehowa abɔ kwan fann a ɛso fa nyɛ den a yɛbɛfa so akɔ n’anim ama yɛn—mpaebɔ. Abofra ketewaa mpo betumi abɔ Yehowa mpae wɔ gyidi mu, wɔ Yesu din mu. (Yohane 14:6; Hebrifo 11:6) Nanso, mpaebɔ ma yetumi de nsɛm a ɛkyere yɛn adwene yiye, nsusuwii ne nkate a emu dɔ—a nea ɛyɛ yaw na ɛyɛ den sɛ yɛbɛka ho asɛm mpo ka ho—to n’anim. (Romafo 8:26) Mfaso biara nni so sɛ yɛbɛyɛ sɛ yɛde anotew, adɔkɔdɔkɔsɛm anaa kasatenten bɛbɔ Yehowa mpae na ama n’ani agye yɛn ho. (Mateo 6:7, 8) Nanso, Yehowa nkyerɛ bere tenten a ɛsɛ sɛ yɛne no kasa anaa mpɛn dodow a ɛsɛ sɛ yɛne no kasa. N’asɛm mpo ka kyerɛ yɛn sɛ ‘yennnyae mpaebɔ da!’—1 Tesalonikafo 5:17.
12 Kae sɛ Yehowa nkutoo na wɔfrɛ no “mpaebɔ tiefo,” na ofi tema mu ankasa na etie yɛn. (Dwom 65:2) So otie n’asomfo anokwafo mpaebɔ kɛkɛ? Dabi, n’ani gye ho ankasa. N’asɛm de mpaebɔ a ɛte saa toto aduhuam a wɔhyew a ne huam tu kɔ soro no ho. (Dwom 141:2; Adiyisɛm 5:8; 8:4) So ɛnyɛ awerɛkyekye sɛ yebenya adwene sɛ yɛn mpaebɔ a efi komam no nso foro kɔ soro na ɛsɔ Amansan Hene no ani? Enti sɛ wopɛ sɛ wobɛn Yehowa a, fi ahobrɛase mu bɔ no mpae mpɛn pii, da biara. Yi wo yam kasa kyerɛ no; mfa biribiara nsie no. (Dwom 62:8) Ka wo dadwen, w’anigye, w’aseda, ne w’ayeyi ho asɛm kyerɛ wo soro Agya no. Ɛbɛma wo ne ne ntam abusuabɔ mu akɔ so ayɛ den bere nyinaa.
Ɔsom a Yɛde Bɛma Yehowa
13, 14. Yehowa a yɛbɛsom no no kyerɛ dɛn, na dɛn nti na ɛfata sɛ yɛyɛ saa?
13 Sɛ yɛne Yehowa Nyankopɔn di nkitaho a, ɛnte sɛ nea yɛne adamfo anaa obusuani bi rebɔ nkɔmmɔ a yetie no na yɛkasa bi no. Ɛyɛ ɔsom a yɛde rema Yehowa ankasa, na yɛnam so de nidi a ɛsɛ no ma no. Yɛn asetra nyinaa gyina nokware som so. Ɛyɛ sɛnea yefi yɛn kra nyinaa ne ahofama mu dɔ Yehowa no na ɛka Yehowa abɔde anokwafo nyinaa, wɔn a wɔwɔ soro anaa asase so no bom. Ɔsomafo Yohane tee wɔ anisoadehu bi mu sɛ ɔbɔfo bi de ahyɛde yi rema sɛ: “Monkotow nea ɔyɛɛ soro ne asase ne ɛpo ne asuti no.”—Adiyisɛm 14:7.
14 Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛsom Yehowa? Dwen su ahorow a yɛasusuw ho te sɛ kronkronyɛ, tumi, ahosodi, atɛntrenee, akokoduru, mmɔborohunu, nyansa, odwo, ɔdɔ, ayamhyehye, nokwaredi, ne papayɛ no ho hwɛ. Yɛahu sɛ Yehowa yɛ gyinapɛn a ɛsen biara, su a ɛsom bo biara ho nhwɛso. Sɛ yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛte ne su ahorow nyinaa ase a, yehu sɛ ɔsen Onipa kɛse a wobu no sen biara koraa. N’anuonyam korɔn sen yɛn koraa. (Yesaia 55:9) Akyinnye biara nni ho sɛ Yehowa ne yɛn Tumfoɔ, na ɔfata sɛ yɛsom no. Nanso, ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ yɛsom Yehowa?
15. Ɔkwan bɛn so na yebetumi asom Yehowa “honhom ne nokware mu,” na hokwan bɛn na Kristofo nhyiam ma yenya?
15 Yesu kae sɛ: “Onyankopɔn yɛ honhom, na wɔn a wɔsɔre no no, ɛsɛ sɛ wɔsɔre no honhom ne nokware mu.” (Yohane 4:24) Ɛno kyerɛ sɛ yɛde koma a gyidi ne ɔdɔ ayɛ no ma bɛsom Yehowa, na ne honhom akyerɛ yɛn kwan. Ɛkyerɛ nso sɛ yebegyina nokware nimdeɛ a ɛwɔ Onyankopɔn Asɛm mu so asom no nokware mu. Yɛwɔ hokwan a ɛsom bo a yɛde bɛsom Yehowa “honhom ne nokware mu” wɔ bere biara a yɛne yɛn mfɛfo asomfo behyiam no. (Hebrifo 10:24, 25) Sɛ yɛto Yehowa ayeyi dwom, bom bɔ mpae, na yetie N’asɛm mu nkɔmmɔbɔ nya mu kyɛfa a, na yɛreda ɔdɔ adi akyerɛ no wɔ nokware som mu.
Sɛ anuanom hyiam wɔ Kristofo nhyiam ahorow ase a, wɔde anigye som Yehowa
16. Ahyɛde akɛse a wɔde ama nokware Kristofo no mu biako ne dɛn, na dɛn nti na yɛte nka sɛ ɛsɛ sɛ yedi so?
16 Yɛsom Yehowa nso bere a yɛka ne ho asɛm kyerɛ afoforo, na yeyi no ayɛ wɔ baguam no. (Hebrifo 13:15) Nokwarem no, Yehowa Ahenni ho asɛmpa a yɛbɛka no yɛ ahyɛde akɛse a wɔde ama nokware Kristofo no mu biako. (Mateo 24:14) Yɛde anigye di so efisɛ yɛdɔ Yehowa. Sɛ yedwen sɛnea “wi yi ase nyame,” Satan Ɔbonsam, “afura wɔn a wonnye nni no adwene ani,” na ɔredi atoro gu Yehowa so denneennen no ho a, so yɛn ho mpere yɛn sɛ yɛbɛyɛ yɛn Nyankopɔn Adansefo, na yɛasiesie ntwiri a ɛte saa no? (2 Korintofo 4:4; Yesaia 43:10-12) Na sɛ yesusuw Yehowa su ahorow a ɛyɛ anigye no ho a, so biribi nkanyan yɛn sɛ yɛnka ne ho asɛm nkyerɛ afoforo? Nokwarem no, hokwan biara nni hɔ a ebetumi akyɛn sɛ yɛbɛboa afoforo ma wɔabehu yɛn soro Agya no na wɔadɔ no sɛnea yɛahu no na yɛdɔ no no.
17. Dɛn na ɛka ɔsom a yɛde ma Yehowa no ho, na dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛsom nokware mu?
17 Pii ka ɔsom a yɛde bɛma Yehowa no ho. Ɛfa yɛn asetram biribiara ho. (Kolosefo 3:23) Sɛ yegye Yehowa tom sɛ yɛn Amansan Hene a, ɛnde yɛbɛyɛ n’apɛde wɔ biribiara mu—yɛn abusua asetram, honam fam adwumam, sɛnea yɛne afoforo di nsɛm mu, ne yɛn ahomegye bere mu. Yɛbɛbɔ mmɔden sɛ yɛde “koma mũ” bɛsom Yehowa nokware mu. (1 Beresosɛm 28:9) Koma fã anaa asetra akwan abien—nyaatwom a yɛbɛyɛ de ada yɛn ho adi sɛ yɛsom Yehowa bere a yɛkɔ so yɛ bɔne a anibere wom wɔ kokoam—nni afã biara wɔ ɔsom a ɛte saa mu. Nokwaredi mma yentumi nyɛ nyaatwom saa; ɔdɔ a yɛwɔ no no ma ɛyɛ yɛn abofono. Onyankopɔn suro nso betumi aboa. Bible kyerɛ sɛ ɔsom a ɛte saa no ma yɛkɔ so ne Yehowa nya abusuabɔ pa.—Dwom 25:14.
Sua a Yebesuasua Yehowa
18, 19. Dɛn nti na ɛfata sɛ wubesusuw sɛ nnipa a wɔnyɛ pɛ betumi asuasua Yehowa Nyankopɔn?
18 Nhoma yi afã no mu biara de ti bi a ɛka sɛnea ‘yebesuasua Onyankopɔn sɛ mma adɔfo’ na ewie. (Efesofo 5:1) Ɛho hia sɛ yɛkae sɛ ɛwom sɛ yɛnyɛ pɛ de, nanso yebetumi asuasua sɛnea Yehowa de ne tumi di dwuma, da n’atɛntrenee adi, yɛ n’ade nyansa ne ɔdɔ mu, wɔ ɔkwan a ɛyɛ pɛ so no. Yɛyɛ dɛn hu sɛ yebetumi asuasua Ade Nyinaa so Tumfoɔ no ankasa? Kae sɛ, Yehowa din nkyerɛase no kyerɛ yɛn sɛ ɔdan ne ho sɛnea ɔpɛ na ama wadi n’atirimpɔw ho dwuma. Ɛfata sɛ saa a ɔyɛ no yɛ yɛn nwonwa, nanso so ɛyɛ nea yentumi nsuasua no koraa? Dabi.
19 Wɔyɛɛ yɛn Onyankopɔn suban so. (Genesis 1:26) Enti, nnipa nte sɛ abɔde afoforo a ɛwɔ asase so no. Ɛnyɛ nkate, awosu, anaa nneɛma a atwa yɛn ho ahyia kɛkɛ na ɛma yɛyɛ ade. Yehowa ama yɛn akyɛde a ɛsom bo—yɛ a yetumi yɛ nea yɛpɛ. Ɛmfa ho sɛ yɛwɔ sintɔ ahorow no, yɛwɔ hokwan koraa sɛ yɛpaw nea yɛpɛ sɛ yɛyɛ. So wopɛ sɛ woyɛ obi a ɔwɔ ɔdɔ, nyansa, obu atɛntrenee na ɔde tumi di dwuma ɔkwan a ɛfata so? Esiane Yehowa honhom mmoa nti, wubetumi ayɛ saa pɛpɛɛpɛ! Susuw adepa a wubetumi ayɛ no ho hwɛ.
20. Sɛ yesuasua Yehowa a, adepa bɛn na yebetumi ayɛ?
20 Wobɛsɔ wo soro Agya ani, na woama ne koma ani agye. (Mmebusɛm 27:11) Wubetumi ‘asɔ’ Yehowa “ani koraa,” efisɛ ɔte wo sintɔ ahorow ase. (Kolosefo 1:9, 10) Na bere a wokɔ so nya su pa de suasua W’agya a wodɔ no no, wubenya hokwan kɛse bi. Wobɛyɛ hann kurafo wɔ wiase a aduru sum a atwe ne ho afi Onyankopɔn ho no mu. (Mateo 5:1, 2, 14) Wobɛboa ma wɔatrɛw Yehowa su ahorow a anuonyam wom no bi mu wɔ asase so mmaa nyinaa. Anuonyam bɛn ara ni!
Ɛmmra sɛ wobɛbɛn Yehowa bere nyinaa
21, 22. Akwantu a enni awiei bɛn na ɛda wɔn a wɔdɔ Yehowa nyinaa anim?
21 Afotu tiatiaa yi a wɔyɛɛ ho kyerɛwtohɔ wɔ Yakobo 4:8 no nyɛ botae bi ara kwa. Ɛyɛ akwantu bi. Bere tenten a yɛkɔ so di nokware no, saa akwantu no remma awiei da. Yɛbɛkɔ so abɛn Yehowa bere nyinaa. Nokwarem no, yɛbɛkɔ so anya nneɛma pii asua wɔ ne ho. Ɛnsɛ sɛ yesusuw sɛ yɛasua Yehowa ho ade nyinaa awie wɔ nhoma yi mu. Hwɛ, afei ara na yɛafi ase resusuw nea Bible ka fa yɛn Nyankopɔn ho no ho! Na Bible no ankasa mpo nka nea yebetumi ahu afa Yehowa ho no nyinaa nkyerɛ yɛn. Ɔsomafo Yohane susuwii sɛ sɛ wɔkyerɛw biribiara a Yesu yɛe wɔ n’asase so som adwuma no mu a, ‘anka nhoma a wɔbɛkyerɛw no rensen wiase mpo.’ (Yohane 21:25) Sɛ wotumi kaa biribi a ɛte saa faa Ɔba no ho a, ɛnde na wobetumi aka nea ɛsen saa afa Agya no ho!
22 Daa nkwa mpo ntumi mma yensua Yehowa ho ade nwie. (Ɔsɛnkafo 3:11) Ɛnde, susuw anidaso a yɛrehwɛ kwan no ho hwɛ. Bere a yɛbɛtra ase mfirihyia ɔhaha, mpempem, ɔpepem, anaa ɔpepepem pii no, yebehu Yehowa Nyankopɔn ho nsɛm pii asen nea yenim nnɛ no. Nanso, yɛbɛkɔ so ara ate nka sɛ nneɛma a enni ano a ɛyɛ anigye pii wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yesua. Yɛde anigye besua nneɛma pii, efisɛ yɛbɛte nka bere nyinaa sɛnea odwontofo a ɔtoo dwom yi tee nka no: “Onyankopɔn nkyɛn tra ye ma me.” (Dwom 73:28) Daa nkwa bɛyɛ nea mfaso wɔ so na ɛyɛ anigye ankasa—na Yehowa a yɛbɛbɛn no no bɛyɛ ɛso akatua a ɛsen biara.
23. Dɛn na wɔahyɛ wo nkuran sɛ yɛ?
23 Ɛmmra sɛ wobɛyɛ Yehowa dɔ ho biribi mprempren denam wo koma nyinaa, wo kra nyinaa, w’adwene nyinaa ne w’ahoɔden nyinaa a wode bɛdɔ no so. (Marko 12:29, 30) Ɛmmra sɛ wo dɔ bɛyɛ nokware dɔ a enhinhim. Ɛmmra sɛ gyinae a wubesisi da biara da, efi nneɛma nketewa so kosi akɛse so begyina nnyinasosɛm koro no ara so—sɛ wobɛfa kwan a ɛbɛma wo ne wo soro Agya no anya abusuabɔ a emu yɛ den so bere nyinaa. Nea ɛsen ne nyinaa no, ɛmmra sɛ wobɛbɛn Yehowa bere nyinaa, na ɔno nso abɛn wo bere nyinaa—de akosi daa!
Dwom 25:1-22 Yɛbɛyɛ dɛn atumi abɛn Yehowa, na ahotoso bɛn na ɛno bɛma yɛanya?
Hosea 6:3 Ɔkwan bɛn so na saa nkyekyɛm yi da no adi sɛ Yehowa a yebehu no no gye mmɔdenbɔ, na ɛyɛ nea nhyira wom?
Mateo 16:21-27 Sɛ yebesuasua Yehowa a, hena nhwɛso na ɛsɛ sɛ yedi akyi, na honhom bɛn na ɛsɛ sɛ yɛda no adi?
Adiyisɛm 21:3, 4 Sɛ wususuw nhyira a Yehowa de bɛba daakye no ho a, dɛn na ɛka wo ma woyɛ?
Ɛyɛ akwannya kɛse paa sɛ yɛka Onyankopɔn ahyehyɛde no ho. Yɛbɛyɛ dɛn ataa adwuma a ahyehyɛde no reyɛ nnɛ no akyi?
Yehowa Nyankopɔn dɔ wo ankasa. Wobɛyɛ dɛn atumi ada ɔpɛ a wowɔ sɛ wobɛyɛ nea ɛsɔ N’ani wɔ w’asetenam da biara da no adi?
Onyankopɔn Asɛm hyɛ Kristofo fekubɔ ho nkuran. Sua akwan a wubetumi afa so anya fekubɔ a ɛte saa so mfaso ho ade.